Ịgụ Oge: 3 nkeji Dabere na YouTube, vidiyo nke awa 72 na-ebugo kwa nkeji ọ bụla! Ndị ọrụ Twitter na-etinye 400 nde ugboro kwa ụbọchị. N’ụwa nke jupụtara na mkpọtụ, ọ na-esiri ike ịnụ ngwaahịa, weebụsaịtị, ma ọ bụ ọrụ. Ọ na-aka sie ike ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla dị iche n’ihe a na-ere ahịa. Kwa ụbọchị, ndị na-ere ahịa na-eche ihe ịma aka ihu iji bulie mkpọtụ ahụ. Na olile anya nke mkpali okike, aga m na 2009